साताको ब्लगर: काकाबा (हरि न्यौपाने) - MeroReport
साताको ब्लगर: काकाबा (हरि न्यौपाने)
जीवनका तीन दर्जन वर्ष लगाएर हुर्काएको नाम पछाडि परेर एक्कासी नयाँ नाम पाउँदा के होला? पक्कै ठुलो दुविधा हुन्छ ।
नयाँ नाम प्रयोग गरुँ कि ? यत्रो वर्ष मेहनत गरेर बचाएको नामलाई के गर्ने ? या दुवै प्रयोग गर्ने ? गुल्मी, विश्वखर्क गाविस, वडा नं ६ मा जन्मे हुर्केका हरी न्यौपाने शायद यस्तै दुविधाबाट गुज्रिरहनुभएको छ । ४० वर्षको हाराहारी पुग्नुभएका उहाँले नयाँ भनिने सामाजिक मिडिया पनि प्रयोग गर्न थाल्नुभयो । फेसबुकसम्म ठीकै थियो । तर नयाँ पुस्ताका एक शुभचिन्तकको सल्लाहमा ट्वीटर प्रयोग गर्न थालेपछि उहाँ काकाबा बन्नुभयो । एक वर्षभन्दा कम समयमै ट्वीटरमा उहाँलाई अभिभावक मान्नेहरु थपिएका छन् । तीमध्ये केहीलाई उहाँको वास्तविक नाम थाहा छैन वा मतलब छैन, उहाँ काकाबा बन्नुभएको छ । मेरोरिपोर्टले ब्लगिङ क्षेत्रका एकजनालाई साताको ब्लगरको रुपमा फिचर गर्ने क्रममा यसपटक माइक्रो ब्लगिङ ट्वीटरका प्रभावशाली प्रयोगकर्ता हरि न्यौपाने अर्थात काकाबालाई प्रस्तुत गरेका छौँ । उहाँ श्रीमती र दुइ छोराहरुको साथ कालिमाटीमा बस्नुहुन्छ । एउटा गोधुली साँझमा सामाजिक मिडियाका साथीहरुसितको छलफलपछि भृकुटीमण्डपको खुला आकाशमुनि उहाँसँग बिनयशेखर र इन्द्रध्वज क्षेत्रीले छोटो कुराकानी गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ कुराकानीको मुख्य अंशः
ट्विटर कहिलेदेखि चलाउन थाल्नु भयो ?
सात आठ महिना भयो । म फेसबुकमा आकार पोस्टसँग साथी थिएँ । उमार्फत नै ट्विटरमा आएको हो । उसले मलाई न्यौपाने काका भन्थ्यो । ट्विटर एकाउन्ट मैले २००९ मा नै खोलेको थिएँ तर निस्कृय जस्तै थियो किनकि फेसबुक चलाईरहेको बानी भएर ट्विटरमा त्यति चाख लागेको थिएन । आकारले नै मलाई एक हप्ता जति हाम्रो समुहमा बस्नुस् भन्यो । म पनि बसेँ । त्यति बेला सम्म टिएफसी नेपाल गठन भइसकेको थियो । मैले पनि अलिकती आर्थिक सहयोग गरेँ । मेरो काका ह्यान्डल नाम पनि आकारले नै सुझाव गरेको थियो । तर काका ब्राजिलको फुटबल खेलाडीको नाममा खोलेको रहेछ अनि काकाबा भनेर राखेँ ।
फेसबुकको युजरनेम ?
हरी न्यौपाने । ट्विटर चलाउन थालेपछी चाहीँ कोष्ठकमा काकाबा राख्न थालेँ । ट्विटर चलाउने साथीहरुले पनि सर्च गरेर चिन्न सजिलो होस भनेर ।
तपाईंलाई ट्विट गर्न प्रेरित गर्ने विषय के के हुन ?
धेरै जसो ट्विट छलफलकै रुपमा गरिन्छ । कुनै त्यस्तो विषय छ भने ट्विटरको टाइमलाईनमा नै छलफल गरौँ भनेर ट्विट गर्ने गर्छु । दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने केहि विषयहरु, कहीँ जाँदा केहि देखियो भने पनि फोटो खिचेर ट्विट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्रै देखि आउँछ । ट्विटरमा एक किसिमको उत्सुकता छ, मलाई अहिले ट्विटर चलाउन एकदमै रमाइलो लाग्छ ।
सोसल मिडियामा फेसबुक ट्विटर बाहेक अरु के के चलाउनुहुन्छ ?
अरु त चलाउँदिन । ब्लगहरु चाँही पढ्छु ।
तपाईंले सोसल मिडिया प्रयोग गर्दा यसको शक्ति कहिले महसुस गर्नु भयो ?
म भर्खर ट्विटरमा प्रवेश गर्दा कान्तिपुरको कोशेलीमा ट्विट छापिन्थ्यो, त्यतिबेला विवाद पनि भएको थियो । आशिष लुइटेलले न्युयोर्क टाइम्सको लेखलाई उल्था गरेर स्रोत नखुलाइ राखेको रहेछ भनेर साथीहरुले पत्ता लगाएपछि यस विषयमा हामीले पनि छलफल गरेका थियौँ । कान्तिपुरको सम्पादकले ट्वीटरबाटै मेन्सनै गरेर जवाफ दिनु भयो । यिनै घटनाहरुले पनि सोसल मिडिया शक्तिशाली रहेछ भन्ने लागेको थियो । यहाँ मात्र नभएर विदेशमा हेर्ने हो भने पनि इजिप्टको आन्दोलनमा ट्विटर , फेसबुकको ठुलो भुमिका रहेको थियो । त्यसैले सोसल मिडिया शक्तिशाली छ ।
के सामाजिक कार्यमा सोसल मिडियाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
अवश्य सकिन्छ । कुनै कुराको विरोधमात्र नभएर सोसल मिडियाबाट सामाजिक कार्य पनि गर्न सकिन्छ । जस्तै टिएफसी नेपाल, बुक फर भिलेज आदिजस्ता अभियानहरु चलेका छन् । ट्विटरबाट हल्ला र गफ मात्र हुँदैन, कुनै गम्भिर विषयमा छलफल पनि हुन्छ र सामाजिक कार्य पनि हुन्छ ।
परम्परागत मिडिया र सोसल मिडियालाई तुलना गर्नुपर्‍यो भने तपाईं के देख्नु हुन्छ ?
धेरै फरक छ । सोसल मिडियालाई धेरै शक्तिशाली मान्छु म ।
तर इन्टरनेटको समस्या त छ नि, गाउँ-गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन ? त्यसले पनि त सोसल मिडियाको प्रभावलाई सिमित गरेको छ नि?
त्यो समस्या छ । तर अहिले नेपाल टेलिकमले पनि इन्टर्नेट गाँउ-गाँउसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ । अहिले गाँउको स-सानो बजारमा पनि इन्टर्नेटको सुबिधा भएको पाउन सकिन्छ । मेरो गाउँमा पनि शान्तिपुर भन्ने बजार छ त्यहाँ समेत वाईफाई इन्टर्नेटको सुबिधा छ । त्यो बजारमा गाउँका पाका मान्छे (बुढा-बुढी)हरु पनि साइबर गएर साइबरवालाकै स्काइप आइडीबाट विदेशमा कुरा गरेको पाइन्छ । र एनटिसीले भने अनुसार दुइ बर्षभित्र वाइ म्याक्स पुग्यो भने त सोसल मिडियाको प्रभाव अझ बिस्तार हुन्छ । मुलधारको मिडिया भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ ।
सोसल मिडियाका प्रयोगकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के-के छन र यसका चुनौतीहरु के-के छन ?
चुनौतीहरु धेरै छन् । हामी आफै पनि अलि सचेत भएर ट्विट गर्नु जरुरी छ । भाषागत कुरामा, व्यक्तिगत रुपमा लाञ्छना लगाउने र अरु धेरै कुराहरुमा पनि सचेत हुन जरुरी छ । मान्छे किटेर आक्षेप लगाउने किसिमले ट्विट गर्नु हुँदैन र दुइ अर्थ लाग्ने ट्विट पनि कम गरौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना हो ।
परिचय लुकाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ नि ?
आइडेन्टिटी लुकाउने समस्या धेरै नै छ, अब हाम्रै फलोअर मध्ये कति त नक्कली नै छन् । मेरो १३ सय फलोअरमा लगभग पाँच सय त फेक र स्पाम नै छन् । यो हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । त्यसको लागि आफै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
यस्तो बिभिन्न समस्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
अब हामीले भन्न र छलफल मात्रै गर्न सकिन्छ । यस्ता समस्याको बारेमा छलफल गरेर यस्तो गरौँ वा नगरौँ मात्रै भन्न सकिन्छ ।
तपाईं कति समय दिनु हुन्छ ट्विटरमा ?
म बिहान एक चोटी गर्छु, दिउँसो एकछिन गर्छु । पहिला त म चौबिस घन्टामा लगभग अठार घन्टा ट्विट गर्थेँ । सुरु-सुरुमा गफ हुन्थ्यो । पछि ट्विटरलाई अलि फरक रुपमा प्रयोग गरौँ भन्ने साथीहरुको पनि सल्लाह भयो र अलि कम भएको छ । ट्विटरमा हुन्छु, टाइम लाईन हेरिरहेको हुन्छु, बिहान ,दिउँसो अनि बेलुका एकछिन चलाईरहेको हुन्छु ।
ट्विटरमा धेरै समय बिताएकोमा परिवारबाट कतिको गुनासो सुन्ने गर्नु भएको छ ?
आउँछ । अलि अलि गुनासोहरु आउने गर्छन् । आफुले नै मिलाउने गर्नु पर्छ ।
ट्विटरको एउटा समुहमा सबैले अभिवाभकको रुपमा मान्छन तपाईंलाई । केहि दायित्व पनि छ जस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो दायित्व त छैन । सबैसँग घुलमिल भइयो । हामी सबै उत्तिकै महत्वपुर्ण छौँ । र सबैको दायित्व उत्तिकै छ जस्तो लाग्छ ।
अब एक छिन मेरोरिपोर्टको कुरा गरौँ । मेरोरिपोर्ट कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
मलाई मेरोरिपोर्ट एकदम राम्रो लाग्छ । नागरिक पत्रकारिताको रुपमा जसले पनि सदस्य बनेर आफ्नो गाँउ-ठाउँबाट पनि समाचार र विचार पोष्ट गर्न मिल्छ । गाउँ-ठाउँ र कुना काप्चाको समाचार पनि आइरहेको हुन्छ जुन मुलधारको मिडियाहरुमा पाइदैन । यो एकदमै सकारात्मक लाग्छ मलाई ।
मेरोरिपोर्टको लागि केहि सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
गाउँ गाउँमा पनि यो पुग्न सक्यो भने अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
उहाँलाई ट्वीटरमा फलो गर्नको लागिः @KakaBaa
यु ट्युब :
Comment by Binaya Shekhar on April 26, 2012 at 9:30pm
Congratulation Kaka. Your are truly Hero of Twitter, micro blogging.
Comment by Umesh Sigdel on April 26, 2012 at 3:01pm
बधाई छ काका !
Comment by Lenin Banjade on April 26, 2012 at 1:42am
हाम्रा बा त साह्रै नै जाति छन्, बच्चादेखि बुढा नि साथी छन् :)
Comment by Friendycalls on April 25, 2012 at 6:54pm
काकाबा लाई मुरीका मुरी बधाई :)
Comment by binod bhattarai on April 25, 2012 at 6:31pm
बधाई काकालाई @kakaBaa
Comment by Kranti Darai on April 25, 2012 at 6:25pm
congratulations kakabaa ..
Comment by Suman Luitel on April 25, 2012 at 5:59pm
काकाबा लाई मेरो रिर्पाेटले यो स्थान दिएकोमा मलाई निकै खुसि लाग्यो । उहाँलाई साताको ब्लगरको रुपमा राखिएको रहेछ । मलाई थाहा भएसम्म काकाबाको ब्लग छैन । साताको ब्लगर भन्दा ब्लग चलाउनेहरु मध्येबाट छानिएको भन्ने अर्थ बुझे मैले चै । उहाँ सामाजिक संजालको हिरो हो । धेरैले उहाँलाई पछ्याउँछन । उहाँसँग ती संजालबाटै अन्तकि्रया गर्छन । त्यसैले यहाँ मेरो रिर्पाेटमा त्यहि अनुसार उहाँलाई प्रस्तुत गरिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । तर जे होस राम्रो शुरुवात भा छ बधाई छ काका !
Comment by सरोज कार्की on April 25, 2012 at 4:39pm
काकाबालाई बधाइ ।
Comment by Indra Dhoj Kshetri on April 25, 2012 at 4:34pm
सच्याइएको 'उहाँ श्रीमती र दुइ छोराहरुको साथ कालिमाटीमा बस्नुहुन्छ ।'
Comment by Kabita on April 25, 2012 at 4:26pm
धेरै धेरै बधाई काकालाई @kakaBaa
Comment by ramesh khatri on April 25, 2012 at 4:02pm
Congratulations @kakabaa !!!
Comment by JawKnockRaazaa on April 25, 2012 at 4:02pm
Kaka congrats! KAKA kaa duiwatai chhora hoinan ra bhanya??? :))
Comment by Prakash Lamichhane on April 25, 2012 at 3:57pm
ओहो काका । बधाइ छ है ।
Comment by Pagal Basti on April 25, 2012 at 3:48pm
बधाइ छ काकाबा @KakaBaa लाइ
Comment by Amuna Chapagain on April 25, 2012 at 3:40pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on April 25, 2012 at 3:38pm
ल काकालाई धेरैधेरै बधाई । ट्वीटरले काकाको छहारी पाइ नै रहनेछ भन्ने बिश्वास गर्दछौँ ।
Comment by Aakar Anil on April 25, 2012 at 3:37pm
Congratulations Kaka Baa. :)
Comment by Ajeeta Sigdel on April 25, 2012 at 3:29pm